1. Chit Su ကလေး ၃ နှစ် လက်နဲ့ခြေထောက်မှာ အရေခွံတွေတအားကွာနေတယ်။ ဘာဖြစ်တာလဲရှင့်။ ဓါတ်တစ်ခုခုချိ့တဲ့လို့လား ပိုနေလို့လားရှင့်။ စနစ်တကျ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်… ဓါတ်ချွတ်ယွင်းခြင်းထက် အရေပြားဆိုင်ရာ ပြဿနာ တစ်ခုခု (ဥပမာ...
သွေးလွန်တုပ်ကွေးမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ။ ဖြေ ။ ။ နေ့ဘက်ကိုက်သော ခြင်ကြားမှတစ်ဆင့် သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်သောကြောင့် ခြင်ကြားမပေါက်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ခြင်ကြားကရေကြည်ရေသန့်မှာပေါက်ပွားလေ့ရှိပါတယ်။ ခြင်ကြားမပေါက်ပွားနိုင်အောင် အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် ကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုံး – ရေစည်၊ ရေအိုးများကို...
1. Thet Thanzin Phyo သမီးလေးက ၂ လပါရှင့်။ နှာခေါင်းထဲမှာ နှပ်ချီးခြောက်တေရောက်လာရင် မအိပ်နိုင် နို့မစို့နိုင်ဖစ်လာလို့ပါ။ Burmetonလည်းတိုက်ပါတယ်။ နှာခေါင်းထဲလည်း N.s အစက်ချဆေးလည်းထည့်ပါတယ်။ မသက်သာလို့ပါ။ နှပ်ချီးခြောက်တေကို ဘယ်လိုများဖယ်ရှားပေးသင့်ပါသလဲရှင်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ...
1. Ma Ma ဆရာ သမီးလေးက ၉ လပါ။ နားထဲကို လက်အမြဲထည့်ပြီး ပွတ်ပွတ်နေပါတယ်။ ၂ လလောက်က နားရွက်ကိုဆွဲတာ အရမ်းဖြစ်ပေမဲ့ အခုတော့ လက်ထည့်နေလို့ပါ။ ဘာလုပ်ရမလဲရှင့်။ နားအတွင်းပိုင်းကို သေချာ...
မေး။ ။ ကလေးတုပ်ကွေးဖျားရင် ဘာတွေစောင့်ကြည့်ရမလဲ။ ဖြေ ။ ။ ကလေးတစ်ယောက် မိုးရာသီမှာ ဖျားရင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကို ခေါင်းထဲမှာ အမြဲထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တုပ်ကွေးဖျားတဲ့ကလေးတွေဟာ လူကြီးတွေလိုပဲ ကိုယ်လက်တွေ နာပါတယ်။ စောင့်ကြည့်ရမယ့် လက္ခဏာတွေကတော့...
1. Sumon Lay ဆရာရှင် သမီးလေးက ၈ လပြည့်ပြီးပါပြီ။ သွားတစ်ချောင်းမှ မပေါက်သေးလို့ ဘာလုပ်ရမလဲရှင်။ သွားမပေါက်သေးတာ စိုးရိမ်စရာ မရှိပါဘူး… သွားပေါက်ခြင်းဟာ ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူညီကြပါဘူး... တချို့ကလေးတွေမှာ တစ်နှစ်ကျော်တဲ့အထိ...